🥇 ▷ Kaydka bilowga ah ee "Flash Fold" wuxuu si dhakhso ah uga socdaa Korea ✅
Kaydka bilowga ah ee “Flash Fold” wuxuu si dhakhso ah uga socdaa Korea
Dhowr bilood ka dib oo Samsung ay qaadatay tixgelin aad u wanaagsan oo ku saabsan dhaleeceynta ay ka heshay warbaahinta oo fursad u heshay inay tijaabiso Galaxy Fold ka hor inta aan la furin, shirkaddu waxay umuuqataa inay leedahay Waxay hagaajisay dhamaan kutaan-gallada waxayna sameysay isbeddelo ku yimid naqshadda marinka.
Tan iyo bishii Sebtember ee la soo dhaafay, Galaxy Fold It Waxaa durba laga heli karaa Kuuriya iyada oo loo marayo hawl wadeenno kala duwan oo adeegyadooda ka bixiya dalka. 24 saac kadib markii la bilaabay, dhamaan unugyada horey ayaa loo keydiyay. Haa, saamiga bilowgu wuxuu ahaa 1,000 halbeeg. Hawlwadeenka SKT wuxuu ka takhalusay alaabtii ay heli kartay 15 daqiiqo gudahood.
Sida laga soo xigtay ragga SamMobile, oo tixraacaya ilo ka soo jeeda Korea Herald, saamiga ugu horreeya ee hawl wadeennada iibiya ay iibinayaan, Boos celinta qaabkan uu Samsung ku bixiyo dukaamadiisa iyo boggisa lama xisaabin.
Sida ku xusan xogta uu siiyay howl wadeenka, inta badan dadka wax iibsada waxay ahaayeen dhalinyaro da’doodu u dhaxayso 20 ilaa 30 sano jir badidoodana rag, gaar ahaan 90%. Qiimaha Galaxy Fold waa Korea waa 1,800 euro oo la beddelo iyo kaalmada ugu badan ee ay hawl-wadeenadu ku deeqi karaan waa 150 euro oo la beddelo, sidaa darteed qiimaha ugu dambeeya kama sarreyn midka aan Yurub ka heli doonno.
Samsung ayaa ku dhawaaqday maalmo ka hor, Samsung waxay imaan doontaa Yurub, iyadoo laga bilaabayo France, Jarmalka iyo Boqortooyada Ingiriiska 18ka Sebtember waana dhici doonaa qiimo dhan 2000 euro. Waxay imaan doontaa Spain bartamaha bisha Oktoobar, in kasta oo taariikhda gaarka ah aan wali la cayimin.
Qorshayaasha wax soo saar ee ugu horreeya ee aaladdaan, markii loo qorsheeyay in la bilaabo bisha Abriil, Waxay ahayd hal milyan oo unug. Annagu garan mayno haddii shirkadda Kuuriyada ahi beddelay qorshayaasheeda arrintan la xiriira. Shirkadda saadaasha iibka ee Kuuriya ayaa u dhaxaysa 20,000 iyo 30,000 unug.